• Temperature avo • Fihodinana lalina
Vaovao farany tamin'ny taona 2016, ny CSPOWER dia nanao patanty High Temperature Solar Deep Cycle maharitra ela ny bateria Gel, safidy tsara indrindra hiasa amin'ny toerana mafana / mangatsiaka ary mitazona fiainana maharitra mandritra ny 18 taona.
Ny mari-pana ambony voaisy tombo-kase maimaim-poana amin'ny fikojakojana lalina GEL bateria miaraka amin'ny fiainana famolavolana 15-20ys amin'ny serivisy mitsingevana, 30% mihoatra ny bateria Gel mahazatra, ary 50% mihoatra ny bateria Lead Acid AGM.
HTL SERIES MAFANA AVY FAHAFATESANA BATTERY GEL CYCLE DEEP
Volavolan'ny herinaratra: 6V, 8V, 12V
Fahaiza-manao: 6V200Ah~6V420Ah, 8V170Ah~8V200Ah, 12V14Ah~12V300Ah
Namboarina mitsingevana fiainana fanompoana: 15 ~ 20 taona @25°C/77°F
> Famintinana ho an'ny batterie Solar Gel amin'ny hafanana ambony
Vaovao farany tamin'ny taona 2016, CSPOWER dia nanao patanty High Temperature Solar Deep Cycle Long Life Gel bateria, safidy tsara indrindra hiasa amin'ny toerana mafana / mangatsiaka ary mitazona fiainana maharitra mandritra ny 15 taona.
Nanomboka ny taona 2003, nanomboka ny fikarohana ny CSPOWER ary namokatra bateria fitehirizana AGM sy GEL voaisy tombo-kase maimaim-poana.Ny batteries dia ao anatin'ny dingan'ny fanavaozana hatrany araka ny tsena sy ny tontolo iainana: Batterie AGM → bateria GEL → Batterie GEL Temperature Long Life Deep Cycle GEL.
Hatramin'ny 2010, dia manana mpanjifa bebe kokoa avy any Afrika sy Moyen Orient tsena, koa araka ny toetr'andro maneran-tany lasa mafana sy mafana kokoa, indrindra fa any Afrika sy Afovoany Atsinanana, bebe kokoa ny fampiharana mila ny fiainana lava fitehirizana bateria miasa amin'ny hafanana ambony, fa ara-dalàna. Ny mari-pana miasa amin'ny bateria dia 25 ℃, isaky ny 10 ℃ ny fitomboan'ny mari-pana miasa dia hampihena ny fiainan'ny bateria 50%, satria ny mari-pana ambony dia manafaingana ny harafesina amin'ny takelaka firaka, mampihena ny conductivity sy ny faharetana.
Mba hamahana ity olana ity, taorian'ny fikarohana 2 taona dia nahomby ny ekipa mpikaroka CSPOWER.Mamokatra firaka vaovao mahatohitra harafesina izahay ary manatsara ny firafitry ny grid mba hanatsarana ny fahafahan'ny batterie mahatohitra harafesina, hanalava ny androm-piainany rehefa miasa amin'ny faritra mafana be.Omentsika anarana hoe "Batterie Gel amin'ny Temperature Long Life Deep Cycle Gel", nampifangaro ny teknolojia vaovao farany amin'ny gel sarotra, Super-C, fitaovana manohitra ny hafanana, firaka mahatohitra harafesina sy ny sisa.
> Endri-javatra ho an'ny mari-pana ambony tsingerin'ny masoandro bateria Gel
HTL andian-dahatsoratra lalina cycle gel bateria dia manokana mari-pana ambony voaisy tombo-kase maimaim-poana fikojakojana ny lalina tsingerin'ny GEL bateria amin'ny 15-20ys famolavolana fiainana amin'ny mitsingevana fanompoana, 30% mihoatra noho ny mahazatra Gel bateria, ary 50% mihoatra noho ny Lead Acid AGM bateria.
Izy io dia mifanaraka amin'ny fenitra IEC, CE ary ISO.Miaraka amin'ny teknolojia fanaraha-maso valva nohavaozina sy ny akora GEL manta madio indrindra nafarana avy any Alemaina, ny bateria andiany HTL dia mitazona ny tsy fitoviana avo lenta ho an'ny fampandehanana tsara kokoa sy ny fiainan'ny serivisy azo antoka.Izy io dia natao manokana hampiasaina amin'ny toerana ambany hafanana sy mangatsiaka.
> Tombontsoa ho an'ny batterie Solar Gel amin'ny hafanana ambony
Garantie telo taona amin'ny 35°C-40°C eo ho eo
Afaka miasa amin'ny -40 ° C hatramin'ny 60 ° C
Ny fiainana lava kokoa sy ny fahamarinan-toerana ambony kokoa amin'ny hafanana ambony.tontolo iainana (Tena azo ampiharina amin'ny rafitra angovo azo havaozina na rafitra herinaratra hybrid amin'ny toe-javatra sarotra.)
Manaova takelaka firaka Super-C additives: fahaiza-manao fanarenana lalina
Fampiasana tsingerina lalina: 50% DOD, 1500-1600 Cycles miasa amin'ny hafanana avo / mangatsiaka.faritra.
> Fanorenana ho an'ny Bateria Gel Solar Cycle Deep
Ny bateria gel tsingerin'ny HTL lalina dia mampiasa firaka mahery vaika mahatohitra ny harafesina ary firafitry ny grid patented tsy manam-paharoa, ka afaka manatsara ny fahombiazan'ny takelaka firaka amin'ny hafanana avo.
Izy io dia mandray ny tahan'ny takelaka firaka ratsy sy ny electrolyte gel nano tsy manam-paharoa, ka afaka manatsara ny bateria overpotential ny fivoaran'ny hydrogène amin'ny fomba mahomby ary mampihena ny fahaverezan'ny rano amin'ny tontolo mafana.
Ny raikipohy paste dia ampiana anti-high temperature expanding agent, ka afaka miasa tsy tapaka amin'ny tontolo iainana ambony.
Ny akoran'ny bateria HTL dia mampiasa fitaovana ABS manohitra ny mari-pana ambony, noho izany ny batterie ao anatiny dia tsy hihoatra ny hafanana mitarika ho amin'ny fahaverezan'ny rano noho ny tontolo iainana avo lenta, hiantoka ny fiainana lava be ny bateria ary tsy hivonto ny akorany na dia ampiasaina amin'ny faritra mafana indrindra aza.
HTL andian-dahatsoratra mampiasa patented gel electrolyte amin'ny nano-metatra fumed silica, izay tombony dia avo hafanana fahaiza-manao sy ny hafanana tsara famotsorana fampisehoana, dia afaka misoroka ny mafana runaway olana ara-dalàna ny bateria, ary ny fivoahana fahaiza-manao dia mety hitombo mihoatra ny 30% amin'ny faritra ambany hafanana.Noho izany, ny bateria HTL dia afaka miasa tsara amin'ny tontolo henjana eo anelanelan'ny -40 ℃ -65 ℃.
Ny raikipony dia manampy manokana super fanitarana mpandraharaha izay miantoka ny bateria famotsorana ny fahafahana dia ambony noho ny hafa mahazatra bateria rehefa miasa amin'ny mari-pana ambany, ka na ny HTL bateria miasa amin'ny -40 ℃ faritra, dia afaka miasa mafy sy mitohy.
> Fampiharana ho an'ny bateria masoandro maharitra maharitra amin'ny hafanana avo
Fiara mandeha amin'ny herinaratra, paompy, fiara golf sy buggies, fiara fitateram-bahoaka, mpamafa, milina fanadiovana gorodona, seza misy kodiarana, kojakoja herinaratra, kilalao mandeha amin'ny herinaratra, rafitra fanaraha-maso, fitaovana ara-pitsaboana, UPS sy rafitra Inverter, Masoandro sy rivotra, Servers, Telecom, vonjy maika ary rafitra fiarovana, Forklift, Marine sy RV, Boat sy ny sisa.
teo aloha: FL Front Access Gel Battery
Manaraka: HLC Lead Carbon Battery
Volonta (V) Fahaizana (Ah) refy (mm) lanja Terminus Bolt
Batterie Gel 12V amin'ny hafanana avo HTL
HTL mari-pana ambony amin'ny tsingerina lalina Gel bateria 6V
Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro Batterie cellule solaire Batterie tsy misy fikojakojana Batterie 12v 7ah azo averina Battery Ups ho an'ny solosaina Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano